अमेरिका आएको केहीसमयमै मेरो ग्रिनकार्ड आयो तर सोसल सेक्युरिटी नम्बर किन आएन ? « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas
अमेरिका आएको केहीसमयमै मेरो ग्रिनकार्ड आयो तर सोसल सेक्युरिटी नम्बर किन आएन ?
कतै सोसल सेक्युरिटी नम्बर नआउँदा सरकारी सुविधाबाट वा काम गर्नबाट बञ्चित हुनुभएको त छैन ? तपाईले यदि भिसा फर्म भर्दा सोसल सेक्युरिटी नम्बर अनुरोध गर्नुभएको थिएन भने तपाईले सोसल सेक्युरिटी अफिसमा गएर आवेदन दिनुपर्छ । यदि अनुरोध गर्नुभएको थियो तर सोसल सेक्युरिटी नम्बर पाउनुभएको छैन भने तुरुन्त युएससीआईएसमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
तपाईको आप्रवासी भिसाको आधारमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश पाए पछि तपाई अमेरिकाको स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । प्रत्येक स्थायी बासिन्दाहरूलाई एक सामाजिक सुरक्षा नम्बर चाहिन्छ। यो नम्बरले संयुक्त राज्यमा काम गर्न, बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्न, तपाईंको कर तिर्न वा कर फिर्ताको निर्भरताको रूपमा सूचीबद्ध गर्न र अन्य उद्देश्यहरूको लागि मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईंले आफ्नो भिसा आवेदन दिंदा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय अन्तरगत फारम डीएस २३० वा डीएस २६० भर्दा सोसल सेक्युरिटी नम्बर कार्ड अनुरोध गर्नुभएको थियो भने अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सामाजिक सुरक्षा प्रशासनलाई तपाईका लागि सोसल सेक्युरिटी कार्ड जारी गर्न आवश्यक जानकारी प्रदान गर्छ । यस्तो अवस्थामा तपार्इले सोसल सेक्युरिटी नम्बर भएको कार्ड प्राप्त गर्न छुट्टै विशेष आवेदन भर्न वा सामाजिक सुरक्षा अफिसमा जानु आवश्यक पर्दैन।
सामाजिक सुरक्षा प्रशासनले तपाईंका लागि सोसल सेक्युरिटी नम्बर तोक्नेछ । र तपाईंलाई अमेरिका आइपुगे पछि उक्त नम्बरसहितको एक सामाजिक सुरक्षा कार्ड पठाउनेछ । यदि तपाईंसँग पहिले नै सोसल सेक्युरिटी नम्बर छ भने तपाईंलाई सोही नम्बरकै नयाँ कार्ड पठाइनेछ । जुन ठेगनामा तपाईको ग्रिनकार्ड पठाइन्छ त्यही हुलाक ठेगनामा तपार्इको सोसल सेक्युरिटी कार्ड पठाइनेछ । तपाई अमेरिका आएको तीनसाताभित्र तपाईले कार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
यदि तपाईले तपाईको भिसा आवेदन दिने बेलामा सोसल सेक्युरिटी नम्बरका लागि अनुरोध गर्नुभएको थिएन भने तपाई कार्डका लागि आवेदन दिन सोसल सेक्युरिटी अफिसमा जानुपर्छ । जब तपाईंसँग आफ्नो स्थायी ठेगाना हुन्छ, त्यसपछि तपाई स्थानीय सोसल सेक्युरिटी अफिसमा गएर आवेदन दिनुपर्छ ।
तपाई सोसल सेक्युरिटी कार्डका लागि आवेदन दिन जाँदा मेसिनले पढ्ने आप्रवास िभिसासहितको आफ्नो पासपोर्ट वा ग्रिनकार्ड साथमै लैजानुहोला । त्यस्तै आफ्नो जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र परिवारका हरेक सदस्यको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पनि सँगै लैजानुहोला । यदि कार्ड रिप्लेसका लागि मात्र आवेदन दिन लाग्नुभएको हो भने तपाईले मेसिनले पढ्ने आप्रवास िभिसासहितको पासपोर्ट वा ग्रिनकार्डमात्र लगेपनि हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्रतिनिधिले तपाईंलाई आवेदन भर्न मद्दत गर्दछन्। आवेदन प्रकृयाका लागि सबै कागजात भएको खण्डमा तपाईंको कार्ड २ हप्तामा प्राप्त हुनेछ । यदि कुनै कागजात थप प्रमाणित गर्न आवश्यक परेमा यो भन्दा लामो समय पनि लाग्नसक्छ ।
श्रोत : सोसल सेक्युरिटी एड्मीनिस्ट्रेशन
बेरोजरगारलाई साप्ताहिक ६ सय दिने अवधि नथपी काममा फर्कनेलाई बोनस दिने प्रस्ताव
अमेरिकामा कोरोनाको महामारीका कारण काम गुमाएकाहरुलाई बेरोजगारी विमा वा महामारी बेरोजगारी सहायताका अतिरिक्त दिदै आएको
न्युयोर्कमा हरेक दिन बेलुका ८ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म एकसाता रात्रीकालिन कर्फ्यु
न्युयोर्क सिटीमा हिजोदेखि सुरु भएको रात्रीकालिन कर्फ्यु आदेश जुन ८ सम्म लम्बाइएको छ । न्युयोर्कका
नेपालमा २८८ नयाँ सक्रमित थपिए, कोरोना संक्रमितको संख्या २०९९
नेपालमा थप २८८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता
न्युयोर्कमा कर्फ्यु मंगलबार पनि, बेलुका ८ बजेदेखि नै सुरु हुने
न्युयोर्क सिटीमा भोलि बेलुका ८ बजेपछि पनि कर्फ्यु लगाइने भएको छ । आज राती ११
अशान्त शिकागो : सप्ताहन्तभर ८२ जनामाथि गोलीप्रहार, १९ को मृत्यु
प्रहरीबाट जर्ज फ्लोयड मारिएपछि अशान्त अमेरिका, कहाँ के भयो ?
कोरोनाबिरुद्ध एन्टिभाइरस नामक औषाधि रुसले विकास गर्‍यो, संक्रमित ४ दिनमै निको भएको दावी
न्युयोर्क सिटीमा आजरातीदेखि कर्फ्यु : के गर्न मिल्छ ? के मिल्दैन ?